I-China Home High Grips Iiglasi zeTyuwa okanye i-Pepper Grinder, iGlasi yomzimba weGlasi yeBhotile kunye nabaxhasi | Jin Guan Yuan
Ikhaya iGrips ephezulu yeGlasi ityuwa okanye i-Pepper Grass, Ibhotile yeXabiso lomzimba weGlasi
Ubungakanani: Umphakamo wee-intshi ezi-5, ezantsi kwe-intshi ezi-2,6, ubude obuyi-180 ml, Ukupakishwa kwe-1
UMGANGATHO WOBUGCISA OBALULEKILEYO NE-ACRYLIC COVER GRINDER SET-Le glasi kunye nentsimbi yentsimbi yentsimbi ipepile inomzobo woyilo wanamhlanje kwaye inesitayile kwaye incomekile ngokwaneleyo ukuba isetyenziselwe ikhitshi-itafile! Inokubamba ikomityi ye-3/4 yetyuwa, ipephores okanye nasiphi na esinye isiqwengana, kwigumbi layo leglasi ngesisa. * Ityiwa nepepile azifakwanga.
UKWAKHIWA YOKUQWALASELANA NOKUGQIBELA Ngokungafaniyo nezinye iiseti zegrafti, Inomatshini wabo wokugraya eqongeni, ukuze uqiniseke ukuba ityiwa nepepile iphelela ekutyeni kwakho- ayizukuphela kwetafile yakho. I-ceramic grinder ayisebenzi-eyonakalisayo, ayizukuthatha iincasa kwaye ihlengahlengiswa ngokulula ukusuka ekunene ukuya ekutyeni okuhlanganisiweyo.
UKWENZA ISANGQA NGENXA YOKUGQIBELA Ngaba awuzondi rhoqo ukuba ugcwalisa ityuwa kunye neepepile zokugaya? Ukuma malunga ne-5 1/4 ye-intshi ubude ukuba le setha lelona lilo lifanelekileyo lokusika ekugcwaliseni rhoqo ngaphandle kokuba bulky. Xa kufuneka ugcwalise kwakhona, imizimba yeglasi ecacileyo iya kukwazisa xa ilixesha!
I-DESIGN EBUKHULU, umzimba weglasi kunye ne-ceramic grinder, le duo iyingqayizivele ngumsebenzi wobugcisa, okongeziweyo kuyo nayiphi na ikhitshi, enesiciko se-Acrylic "esigqibeleleyo" kule seti intle. Akukho zixhobo zokucoca ngombane apha azithethi iibhetri ezifunekayo - kuphela ziiswist ezimbalwa ezingenamsebenzi kwisandla sakho sokufumana ityuwa entsha ye-heralayan, ipepile, okanye esinye isiqholo
Iziqwengana zeGround entsha kunye ne-Twist
UMGANGATHO WOBUGCISA OBALULEKILEYO NOBUGCISA OBUGCINELEKILEYO
Le glasi kunye ne-acrylic yogubungela i-pepper grinder yetafile ineempawu zoyilo yanamhlanje kwaye inesitayile kwaye inobuhle ngokwaneleyo ukuba isetyenziselwe ikhitshi-itafile! Inokubamba ikomityi ye-3/4 yetyuwa, ipephores okanye nasiphi na esinye isiqwengana, kwigumbi layo leglasi ngesisa.
Umzimba weglasi kunye ne-ceramic grinder, le duo ikhethekileyo yingcali, ukongeza okulingeneyo nakweyiphi na ikhitshi, enesiciko se-Acrylic "esigqibeleleyo" kule seti intle. Akukho zixhobo zokucoca ngombane apha azithethi iibhetri ezifunekayo - kuphela ziiswist ezimbalwa ezingenamsebenzi kwisandla sakho sokufumana ityuwa entsha ye-heralayan, ipepile, okanye esinye isiqholo
Edlulileyo: I-Empty Glass Spray yeebhotile ezineebhalbhu (ii-2 Pack) -Izicoci ezingafunekiyo ze-16oz zeeoyile eziBalulekileyo, iimveliso zokucoca, okanye iAromatherapy- Isicwangcisi esimnyama esimdaka
Okulandelayo: Mini Gemstone 7 I-Chakra Crystal Tree yoMthi kwiGlasi yokuNqwenela iiBhotile Ukuphilisa I-Chakra Wire Ware Mthi Wobomi Uqhekekile Amatye eChip
Ibhotile yeglasi ye-Eco-Nobuhlobo
Indawo yokuGcina iiglasi Jar
I-hexagonal Glass Stank Tank
Ukugcina iglasi yeJar
Ikhitshi ethengiswayo 304 yensimbi engenasici ...
Iseti yeBhotile yeZithambiso, Iglasi yeJar Cosmetic, Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yezipho zeglasi,